कथा : चङ्गाको उडान - Safal Stories
Home Short Stories कथा : चङ्गाको उडान
एउटा बच्चाले चङ्गा उडाउँदै थियो । उडिरहेको चङ्गाले उसको मनमा एउटा प्रश्न उब्जायो । बच्चाले नजिकै रहेका आफ्ना बुवासंग सोध्यो, ” बाबा ! के कारणले चङ्गा माथि उड्छ ?”
बच्चाका बुवाले जवाफ दिए, ” धागोले गर्दा नै चङ्गा माथि उड्छ ।” अनौठो मान्दै बच्चाले फेरी सोध्यो, ” धागोले त चङ्गालाई तलतिर पो तान्दैछ।” बच्चाका बुवाले ‘ल, ध्यानपूर्वक हेर त !’ भन्दै धागोलाई च्वाट्ट चुडालिदिए । दागो चुडालिदिएपछि, उडिरहेको चङ्गा एकाएक तल झर्यो ।
यो अवस्था हाम्रो जीवनमा पनि लागु हुन्छ । कैयौंपटक हामी पनि झुक्कीन्छौँ । कुनै वस्तुले हामीलाई तल तानिरहेको सोचाई लिन्छौं. यथार्थमा त्यसो हुँदैन । तल तानेको भनिएकै वस्तुले, हामीलाई माथि उठ्न सघाइरहेको हुन्छ । अनुशासनको काम पनि यही र यस्तै हो ।
साभार : तपाईंको जित, शिव खेडा, पेज नं. १५८
Previousविश्वमै सबैभन्दा लामो वैवाहिक सम्बन्ध बिताउने जोडी, श्रीमानको यसै हप्ता निधन
Nextजागिरको अन्तर्वार्ताको लागि टिप्स